Wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Apple Music-ka cusub | Wararka IPhone
Wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Apple Music cusub ee Dolby Atmos iyada oo aan tayada la lumin
Luis Padilla | 18/05/2021 00:19 | Apple Music, Noticias
Apple maanta waxay ku dhawaaqday adeegeeda cusub ee Apple Music "Lossless", oo ah hab cusub oo lagu dhagaysto muusikada xalka sare leh oo leh codka meeraha ee Dolby Atmos. Sideen uga faa'iideysan karaa shaqadan cusub? Waxaan kuugu sharaxeynaa hoosta.
1 Muxuu yahay "bilaa khasaaro" muusig, khasaaro la'aan
2 Xagee ka dhageysan karaa heesaha bilaa khasaaro
3 Waa maxay maqalka maqalka iyo Dolby Atmos
4 Xagee ka dhagaysan karaa heesaha Dolby Atmos?
5 Laba sheeko oo madax-bannaan oo kala duwan
Muxuu yahay "bilaa khasaaro" muusig, khasaaro la'aan
Imaatinka adeegyada qulqulka muusigga waxay la macno tahay inaan ka tagno CD-yadayada, oo aan ku qaadanno maktabadayada muusikada oo dhan jeebka, mahadnaqa casrigayaga. Laakiin tani waxay ku timaaddaa qiimo: riixid. Si aad ugu gudbiso muusikada internetka oo aad ugu kaydiso qalabkeena, qaabab isku duuban ayaa la isticmaalaa, taas oo ka dhigaysa faylasha mid aad u yar, oo sidaasna ku cunaya xaddiga xogta yar, baaxadda yar iyo qaadashada meel yar. Si kasta oo ay u fiicnaato riixintu, tayada luma waa lama huraan.
Muusigga luminta ah wuxuu ka socdaa "16-bit 44.1kHz" illaa "24-bit 48kHz" haddii aan ka hadlayno tayada CD-ga, halka haddii aan ka hadlayno "Xallinta Sare" aan kor ugu kaceyno "24-bit 192kHz". Haddii aan u gudubno ugu badnaan tayada Go'aanka Sare, hees fudud ayaa qaadi karta qiyaastii 145MB, marka la barbardhigo 1,5MB qaabab badan oo la tuujiyey, ama 6MB haddii aan dooneyno wax tayo badan. Sida aad u aragto, farqiga u dhexeeya ayaa iska cad.
Apple waxay xaqiijineysaa in waqtiga la bilaabayo, oo ku saabsan 20 milyan oo heeso oo ku jira buugiisa ay ku jiri doonaan qaab aan khasaaro lahayn, gaarayo in ka badan 75 milyan oo hees dhamaadka sanadka. Heesahan cusub ee bilaa khasaaraha ah waxay isticmaali doonaan koodh loo yaqaan "ALAC" (Apple Lossless Audio Codec) waxayna kaa dooneysaa inaad cusbooneysiiso iOS 14.6, iPadOS 14.6, tvOS 14.6 iyo macOS 11.4 si aad ugu raaxeysato.
Xagee ka dhageysan karaa heesaha bilaa khasaaro
Apple ayaa soo bandhigtay liistada aaladaha muusiggan ciyaari kara iyada oo aan lumin tayada, ama tayada CD-ga ama Go'aan Sare. Kuwani waa shuruudaha ugu yar ee lagu soo saari karo:
iPad Pro 12,9 ″ (Jiilka 3aad)
iPad Air (Jiilka 3aad)
iPad (Jiilkii 6aad)
iPad mini (Jiilka 5aad)
Qalabkani wuxuu awood u yeelan doonaa inuu muusig ku ciyaaro tayadan, laakiin taasi macnaheedu maahan inaad awood u yeelan doonto inaad ku dhagaysan karto wax sameecado kasta oo aad ku xirto. Xidhiidhka Bluetooth-ka ahi ma oggola bandwidth ku filan muusigga bilaa khasaaraha ah ee xallinta sare, si kastaba ha noqotee, waxayna ku siin kartaa ilaa tayada CD-ga, laakiin waxay in badan ku xiran tahay nooca Bluetooth-ka loo isticmaalo iyo koodhadhka la jaan qaadaya. Tusaale ahaan, Sida laga soo xigtay Apple lafteeda ayaa xaqiijisay, AirPods Pro ama AirPods Max midkoodna lama jaan qaadi karo koodhka ALAC, si silig la'aan ah ma awoodi doonaan inay muusig garaacaan lumis la'aan, ama tayada CD-ga.
Ma garanayno waqtigan haddii AirPods Max, oo u oggolaanaya isku xirnaanta fiilada, ay awood u yeelan doonto inay muusig garaacdo iyada oo aan lumin tayada iyadoo la adeegsanayo nooc ka mid ah qalab isku habboon. Apple waxay xaqiijineysaa boggeeda internetka in muusigga iyada oo aan lumin tayada xallinta sare ee DAC ay lagama maarmaan noqon doonto, laakiin xilligan ma hayno faahfaahin dheeraad ah. Xaaladda HomePod iyo HomePod Mini sidoo kale wax yar bay ku jiraan, kaas oo ay tahay inuu awood u yeesho inuu ciyaaro muusikada adigoon lumin tayada qalabka, laakiin Apple wax dib u eegis ah kama aysan sameynin boggooda.
Waa maxay maqalka maqalka iyo Dolby Atmos
Cusboonaysiinta kale ee Apple Music waxay noqon doontaa iswaafajinta Dolby Atmos iyo Spatial Audio. Waqtigan xaadirka ah, ka dib markii aan dhowr jeer akhriyay shabakadaha Apple ee kala duwan iyo bogag kale oo mug leh oo wanaagsan oo leh macluumaad ku saabsan, ma sharixi karo farqiga u dhexeeya Dolby Atmos iyo Spatial Audio, maxaa yeelay labada ereyba si isdaba-joog ah ayaa loo adeegsadaa meel kasta, xitaa websaydhka Apple. Marka waxaan dhihi karnaa Dolby Atmos ama Spatial Audio waa nooc ka mid ah dhawaqa hareeraha kaas oo aan ku kala saari karno booska qalabka inta aan dhageysaneyno.: durbaannada gadaasheena, codka hore, gitaarka dhanka midig… waa maqal «3D» ah, oo la mid ah markaan daawanno filim leh nidaam tiyaatarka guriga ah.
Tani Dolby Atmos waxaa laga heli doonaa bilawga adeeggan cusub dhowr kun oo heesood, tirada saxda ah lama cayimin, laakiin Waxaa la filayaa in tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah u helaya leh qaabkan.
Xagee ka dhagaysan karaa heesaha Dolby Atmos?
Inaad awood u yeelato inaad dhageysato muusiggaan daboolay Waxaad u baahan doontaa, ugu yaraan, aaladaha soo socda:
Halkan waxaan ku isticmaali karnaa wixii sameecad ah Apple si aan ugu raaxeysto dhawaqan. AirPods, AirPods Pro, AirPods Max ama Beats headphones, wax macno ah ma sameyn doono, ilaa inta ay ku jiraan jajabka H1 ama W1. Haddii aan isticmaalno sameecadaha dhagaha, Dolby Atmos si otomaatig ah ayaa loo hawlgelin doonaa haddii la heli karo. Haddii aan isticmaalno sameecadaha kale ee saddexaad, oo sidoo kale is waafajin kara, waa inaan ku hawlgelino Apple Music Settings.
Sida muusigga oo aan tayo lahayn, Waa inaad qalabkaaga ku cusbooneysiisaa iOS 14.6, iPadOS 14.6, tvOS 14.6 iyo macOS 11.4 si loogu raaxeysto muusiggan Dolby Atmos.
Laba sheeko oo madax-bannaan oo kala duwan
In kasta oo ay gacanta isla galeen, Dhawaaqa Muuqaalka iyo muusigga iyada oo aan lumin tayada mid waliba kaligiis ayuu iska socdaa Sida la filayo, Dolby Atmos ayaa si aad ah loogu isticmaali karaa aaladaha hadda socda. Iminka aan haysano iPhone, iPad, HomePod ... waxaan ku raaxeysan karnaa dhawaqan ku xeeran headphones-keena Apple, iyada oo aan loo baahnayn maalgashi cusub. Waxyaabaha ayaa isbadala markaan kahadalno dhawaaqa bilaa khasaaraha ah, gaar ahaan Go'aanka Sare. Sugitaanka Apple inay cadeyso shakiga qaar wali hawada ku jira, Waxay umuuqataa inay tahay wax loo diyaariyay qalab cusub goor dhow soo socda.
Apple Music-kan cusub oo wata Dolby Atmos iyo dhawaq aan tayo lahayn ayaa imaan doona bisha Juun, iyo ma jiri doono qiimo koror Apple Music, kaas oo ilaalin doona qiimaha la midka ah kan hadda jira.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Music » Wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Apple Music cusub ee Dolby Atmos iyada oo aan tayada la lumin
Waxaan rajeynayaa inay aad ugafiican tahay howlaha qulqulka ee aan hada isticmaalo tan iyo markii aan isticmaalo iphone 12 caadi ah
Waxaan ku kalsoonahay in wax loo qaban doono si dadka isticmaala ay ugu raaxeysan karaan tayada maqalka, waa la ogyahay in gaarsiinta ugu fiicnaanta codka aysan ku filneyn in maqalka uusan laheyn wax khasaaro ah laakiin jajabyo u heellan ayaa sidoo kale loo baahan yahay oo tayo leh taas ugu badalo sida ugu fiican (DAC), Apple waa shirkad lagu tilmaamo inay sameyso waxyaabo tayo leh shakigana kama lihi inay na siin karaan fursado wanaagsan, marka laga soo tago tan waxaa laga yaabaa inay tani dadka ku dhiiri gelin karto inay bilaabaan dhageysiga muusikadaada khasaaro waa khibrad gebi ahaanba ka duwan tan aan caadiyan u isticmaali karno maqalka marka la eego tayada maqalka
Aad ayaan uga xumahay in headphones-ka wireless-ka ah ee Apple iibiso aysan keenin taageerada muusigga ay hada sii deynayaan, waxaan arkay in sumcadda garaaca ay hadda soo saartay qaar la jaan qaadi kara, waxaan u maleynayaa inaan joojin doono iibsashada samaacadaha Apple iyo sifiican ayaan uga iibsadaa garaaca maxaa yeelay haddii ay leedahay taageero ay ku dhageysato muusikada tayada sare leh, waan jeclahay shirkadda tufaaxa laakiin wax badan kuma aado maamulkeeda.
HomePod iyo AirPods Max Doorkooda Muusikada Apple ee Tayada Sare leh
Apple TV + waxay sii deyneysaa muuqaalka xilli-ciyaareedkii labaad ee 'Home Before Dark'